सूर्योदय लघुवित्तको ७०% हकप्रद भर्ने आज अन्तिम मिति, कहाँ जाने भर्न ?
ARCHIVE, MARKET WATCH » सूर्योदय लघुवित्तको ७०% हकप्रद भर्ने आज अन्तिम मिति, कहाँ जाने भर्न ?
काठमाडौं - सूर्योदय लघुवित्त वित्तीय संस्थाको ७०% हकप्रद भर्ने बुधबार अन्तिम दिन हो । यस हकप्रदमा आज कार्यालय समयभित्र सम्ममा आवेदन दिइसक्नुपर्नेछ । सूर्योदयले फागुन २४ गतेदेखि १ः०.७ अनुपातमा १०० रुपैयाँ दरको २ लाख ८० हजार कित्ता हकप्रद सेयर बिक्री खुला गरेको हो । हकप्रद बिक्रीपछि चुक्ता पुँजी ६ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुग्नेछ ।
लगानीकर्ताले बिक्री प्रबन्धक ग्लोबल आइएमई क्यापिटल राष्ट्रिय नाचघर, काठमाडौं तथा सूर्योदयको रजिष्टर्ड कार्यालय स्याङ्जालगायत पर्वत, गुल्मी, लमजुङ र प्युठान शाखा कार्यालयबाट पनि आवेदन दिन सक्नेछन् । यसैगरी, आस्वा सदस्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट पनि सेयर भर्न मिल्नेछ ।